प्रचण्ड पुत्री रेणुले भनिन रवि लामिछानेको ‘पागलपन’ ? - सुदूर नेपाल
प्रचण्ड पुत्री रेणुले भनिन रवि लामिछानेको ‘पागलपन’ ?
Dinesh khaptadi March 16, 2019 0
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर तथा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालले पत्रकार रवि लामिछानेलाई ‘पागलपन’ को संज्ञा दिएकी छन् । रविले प्रचण्डको बारेमा बोलेको भनाईलाई टिप्पणी गर्दै नेकपाका एक युवा नेताले फेसबुकमा स्टाटस राखेका थिए । सोही स्ट्याटसमा प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले लामिछानेलाई ‘पागलपन’ को संज्ञा दिएकी हुन् ।
पूर्व विद्यार्थी नेता हिमाल शर्माले पत्रकार रवि लामिछानेले प्रचण्ड प्रवृत्ति भन्दै दिएको कडा अभिव्यक्तिका बारेमा प्रश्न गर्दै स्टाटस लेखेका हुन् । शर्माले लेखेका छन्, ‘प्रवृतिलाई हो भन्दै नितान्त व्यक्तिमाथि खनिनुलाई कस्तो प्रवृत्ति भन्छन् ? लामिछाने ज्यू !’ स्टाटसको कमेन्ट बक्समा रेणुले लेखेकी छन्, ‘पागलपन भनिन्छ दाइ’ । पूर्व सहकर्मी नेत्र विक्रम चन्दले आफूलाई पहिलो नम्बरमा मार्ने माइन्यूट तयार गरेको कुरा सरकार मार्फत प्रचण्डले सार्वजनिक गरेका थिए । यसबारे पत्रकार लामिछानेले कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा खरो टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘वाह कमरेड ! जनताका छोरा मरेकोमा पीर परेन तर आफूलाई मार्छु भन्दा बल्ल विप्लव माथि प्रतिबन्ध ?’ जनताको ज्यान असुरक्षित हुँदासम्म मतलव भएन तर आफूलाई मार्ने हो भनेपछि विप्लवमाथि प्रतिबन्ध भन्दै उनले प्रश्न उठाएका थिए । विप्लवको राजनीतिक विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा राजनीतिज्ञलाई नभएर आम जनतालाई थप खतरा रहेको लामिछानेको आशय थियो । उनले थपे, ‘तपाईंसँगै देश बदल्न हिँडेका सबैको जीवन बदलिए तर जनताको अवस्था उस्तै । राजा फालेर जन्मिएका कयौं छोटे राजाहरुको विरोधमा विप्लवले मात्रै होइन सबैले विरोध गर्नै पर्छ, विप्लव प्रवृत्तिको समर्थन कुनै पनि कोणबाट होइन बरु प्रचण्ड प्रवृत्तिको विरोध हरेक कोणबाट गर्नुपर्छ ।’ लामिछानेको यही टिप्पणीलाई प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालले ‘पागलपन’ भनेकी हुन् ।
Previous Post: प्रचन्ड विरूद्धमा बोल्दा रवि लामिछानेलाई कारवाहिकाे माग
Next Post: हामी मध्ये को राम्रो ? भाइरल प्रिस्मा र प्रिन्सी भद्रगोलमा -भिडियो सहित